Archive du 20180126
Orinasa Tiko AAA Hosamborina ny mpitantana ?
Inona loatra no tian’ny fanjakana HVM hahatongavana amin’ny fanakatonana ny orinasa AAA amin’izao fotoana izao ? Ezahina hafangaro amin’i Marc Ravalomanana amin’ny resaka politika kanefa orinasa mamelona olona mivantana an’arivony io ary misy asa tsy mivantana an’aliny. Ny vahoaka ihany koa tia sy misitraka ny vokatra Malagasy.
Andry Rajoelina Manara-dia an-dRavalomanana
Hamory ireo Malagasy mpanara-dia azy mila ravinahitra any Frantsa miaraka amina olona ambony mpiara-miombon’antoka aminy i Andry Rajoelina anio zoma 26 janoary 2018. Efa nilaza ny tenany fa nandalim-pahaizana sy nihaona tamina karazan’olona isan-karazany mba hitadiavam-bahaolana ho an’ny firenena, hono.
Rajaonarimampianina « Mila mampiseho ohatra tsara ny mpitondra »
Nilaza ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina fa te hiroso lalina kokoa amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara rehefa avy nanatsara ny fitantanana sy nametraka ny fahamarinan-toeran’ny rafi-panjakana misy eto.
Fiatrehana ny fifidianana Manana adidy lehibe ny mpiara-belona, hoy ny HOPE
Nanatanteraka loabary an-dasy tetsy amin’ny ivontoerana American Center Tanjombato indray, omaly ny fikambanana Hetsika Olom-Pirenena Entanina (HOPE). Anisan’ny nivoitra tamin’izany ny fampahafantarana ny olom-pirenena tsy ankanavaka ny adidy miandry azy ireny mialoha ny hiatrehana ny fifidianana ho filoham-pirenena izay hotontosaina amin’ity taona 2018 ity, tsy nandoavam-bola fa maimaimpoana.
Solombavambahoaka Malagasy Tsy mba mijery lavitra
Miady mafy ny hantsoina ho “solombavambahoakan’i Madagasikara” voafidy tatsy na taroa ny depiote eto amintsika. Rehefa mandeha anefa ny fihaonana amin’ny governemanta na ny mitovitovy amin’izany, dia mandeha ny hoe: “ny any aminay tahaka izao sy izao”, ka rehefa tsy izay “ny anay sy ny any aminay” izay, dia tsy misy mpiraharaha firy ny zavatra atao.
Fitrohana ny etona karbôna Vola be ho an’ny fanjakana, ahoana ny fanaraha-maso ?
Nahazo famatsiam-bola mitentina 2,150 tapitrisa dolara ny minisiteran`ny Tontolo iainana sy ny haivoary ary ny ala, ho fanomezan-danja ny tontolo iainana tamin`ny alalan`ny FEM na Fonds de l`environnement mondial sy ny PNUD.
Valanaretina pesta Nampihena ny mpizahatany tamin’ny 2017
Omaly no natao tetsy amin`ny village VOARA Andohatapenaka ny fampahafantarana ny ITM (International Tourism Fair Madagascar) andiany fahafito izay hotanterahina ny 31 mey ka hatramin`ny 3 jona 2018.
Tontolon’ny fampianarana Miverina indray ny ambalavelona sy satanika
Nahenoana vaovao hafahafa tao amin’ny CEG Andasibe omaly, araka ny vaovao nalefan’ny radio iray any an-toerana tamin’ny alalan’ny tambajotran-tseraserany. Ankizivavy roa, taona fahafito sy fahasivy no nidiran-javatra toy ny voan’ny ambalavelona sady nanao fihetsika sy fiteny hafahafa.